Как выбрать систему орошения для различных полей и объемов производства — Картофельная Система
Ungayikhetha kanjani uhlelo lokunisela lwamasimu ahlukahlukene kanye namavolumu okukhiqiza
Kungakabiphi, imboni yezolimo ethuthukayo iphakamisa umbuzo wesidingo sokuhlomisa amasimu ngezinhlelo zokunisela. Imakethe yanamuhla inikeza inani elikhulu lemishini yokunisela. Ungakuqonda kanjani lokhu okunqunyelwe bese ukhetha inketho ethembeke kakhulu futhi enenzuzo ezimeni ezithile, sizotshela kulesi sihloko.
Ukufakwa okwenziwa isiyingi
Ku-2020, amaphrojekthi wokulungisa kabusha ama-20 azosetshenziswa esifundeni saseStavropol
I-RUB 1,9 billion Abalimi baseRussia bathola uxhaso lwemisebenzi yokuvuselela kabusha
Abalimi bePenza bazothola ama-ruble angaphezu kwezigidi ezingama-180 zokubuyiselwa komhlaba kabusha
Njengamanje, imishini eyindilinga ebanzi eyindilinga iyisidingo esikhulu kunazo zonke emakethe yaseRussia. Bayakwazi ukumboza kusuka kumahektha angama-20 kuya kwangama-200 enkambu, kuya ngobude bokufakwa. Inzuzo enkulu yezinhlelo eziyindilinga ezimile ukuzilawula kwabo: imishini yenza ngempumelelo imisebenzi yayo ngaphandle kokulawulwa ngabasebenzisi.
Ukucabanga ngohlelo lokunisela lwendawo ethize, kufanele kubhekwe izinto eziningana ezibalulekile: ubukhulu bensimu, ukwakheka kwayo, ubume bendawo, kanye nokuba khona kwezingqinamba (izindawo zamahlathi, izintambo zamandla). Ukuphonsa insimu enkulu kungadinga ama-fafaza ambalwa. Ngokuhleleka kwabo okuhle, kungenzeka ukufezekisa ukumboza okungama-80-85% wayo yonke indawo, okubhekwe njengomphumela omuhle wemishini eyindilinga.
Ukufakwa komkhakha (okuyingxenye yombuthano) kukuvumela ukuthi unisele insimu ngaphandle kokuthinta izindawo ngezithiyo. Kodwa-ke, uma umshini onjalo uhlanganisa umkhakha nge-engeli ephakathi yama-degree angaphansi kwe-180, khona-ke ukusetshenziswa kwawo kuba yize.
Kufanele kubhekwe ngokukhethekile ekukhetweni kwemishini yokunisela amasimu enendawo eyinkimbinkimbi. Izinguquko ezinkulu zokuphakama zingadala ukuthi i-Sprayer iyeke ngaphezulu ngenkathi isebenza. Ngaphezu kwalokho, kufanele kukhunjulwe ukuthi lapho kudluliswa ukufakwa emithambekeni ebalulekile, ingcindezi ekungeneni ekusekelweni okuphakathi komshini iyakhuphuka (okusho ukuthi kuphela ngamapayipi anobukhulu obukhulu obukhulu kufanele asetshenziswe ezindizeni zokuqala zokufakwa), futhi lapho umehluko omkhulu, “ubukhulu” buba ngaphezulu Kuzodingeka amapayipi okwakha. Kuzophazamisa nesiteshi sokupompa nepayipi lepulasitiki, intengo yazo zonke izinto ezisetshenziswayo izokhuphuka ngendlela efanayo.
Ukushaja umshini oyindilinga, kuyadingeka ukulungiselela ingqalasizinda: beka ipayipi lepulasitiki, uthele isisekelo sikakhonkolo ngaphansi kwepiramidi eliphakathi nendawo yokufafaza, khetha isiteshi sepompo futhi unqume umthombo kagesi.
Uma ugesi uxhumekile enkundleni, kungafakwa isiteshi sokuphehla ugesi. Uma kungenjalo, elinye ikhambi kungaba ukufaka i-generator yedizili kanye nesiteshi sepompo.
Kodwa-ke, konke lokhu kusebenza emapulazini ethula ubuchwepheshe bokunisela bokufakelwa endaweni yabo okokuqala ngqa. Kepha kunezimo ezivame lapho ibhizinisi lixazulula inkinga yokufaka esikhundleni sezinhlelo ezikhona (kaningi kusukela esikhathini se-USSR) nezinhlelo zanamuhla. Ukuvuselela uhlelo ngokwemvelo kubiza kancane, njengoba ibhizinisi linengqalasizinda kusuka ekufakweni okudala: ipayipi kanye nesiteshi sokupomula kuyalondolozwa.
Ngasikhathi sinye, ikhwalithi yokusebenza kwemishini yakudala neyintsha cishe ayinakulinganiswa. Izimoto zanamuhla zimboza cishe yonke indawo yensimu. Umsebenzi wokunisela wezindawo ezingenakufinyeleleka kakhulu wenziwa ngamachanishi anamanzi asesilinganisweni. Imishini emisha yokunisela ifakwe uhla olubanzi lwamabhande okufafaza alungele ukunisela izilimo ezahlukahlukene. Ngomsebenzi owukhiqizayo, isifafaza esiyindilinga singafakelwa uhlelo lokufaka isicelo somanyolo oluwuketshezi, isiteshi sezulu esinezinzwa zokuswakama kwenhlabathi.
Imishini yokuhluza isigubhu. Izixazululo Ezincane Zensimu
Emikhakheni lapho kungenakwenzeka ukuthola khona imishini ebanzi kakhulu (njengomthetho, lezi yizindawo ezincane ezinendawo engamahektare angama-20 kuye kwangama-50), sincoma ukufaka imishini yokunisela imigqomo yohlobo lwesigubhu.
Isitshalo esisodwa esinjalo sinisela ngempumelelo amahektha ayi-25-30. Umgomo wokusebenza kwawo ulula: okokuqala, ngosizo lwetraktha, ikhoyili ayisebenzi, isiteshi sokupompa siqalisiwe, bese ikhoyili iqala ukwenziwa kabusha (ngenxa yamanzi ahamba nge-turbine ngaphansi kwengcindezi evela esiteshini sepampu). Ngesikhathi sokudonsa u-hose, ukuchelela nakho kwenzeka. Umklamo onjalo uhlolwe ukusebenza amashumi eminyaka emhlabeni jikelele futhi uhlangabezana nemisebenzi yawo ngangokunokwenzeka.
Izinzuzo ezingenakufinyeleleka zemishini yohlobo lwesigubhu zifaka izindleko zazo (ngokuqhathaniswa nokubamba okuningi), nokushukumiseka nokulula ukufakwa (okukuvumela ukuthi ubasuse ngokushesha ukusuka enkampanini eyodwa kuya kwenye).
Kepha "amakhoyili" anezingqinamba zawo. Okokuqala, okungenani abantu ababili kuya kwabathathu kufanele balawule ukusebenza komshini wohlobo lwesigubhu. Ijubane lokunisela lomshini wesigubhu se-sprinkler-hlobo, njengoba liqhathaniswa nemishini ebanzi yokubamba, nalo lishiya okuningi okungafiseleka: Ukunisela insimu ejwayelekile yamahektha angama-30 ngosayizi kuzothatha umshini okungenani izinsuku eziyi-10. Ngasikhathi sinye, ikhwalithi yokunisela izoba nzima, ngoba kunzima impela ukulawula ukufana kokulethwa kwamanzi, okusho ukuthi izitshalo ezingxenyeni ezithile zensimu kungenzeka zingatholi isilinganiso somswakama esidingekayo.
Ukukhokhisa imishini yohlobo lwesgubhu, kuzodingeka futhi ukubeka ipayipi lepulasitiki, kepha esikhundleni sesisekelo sikakhonkolo, ama-hydrate azodingeka ukuxhuma "coil" kwipayipi. Inani lama-hydrants lincike ekucushweni kwenkambu, ngokwesilinganiso, afakwa njalo ngamamitha angama-50 (uma "i-coil" isetshenziswa ne-console) noma njalo ngamamitha angama-60 (uma "ikhoyili" ngaphandle kwekhonsoli). Amayunithi wokuphehla ugesi noma udizili angasetshenziselwa ukunika amandla umshini ngamanzi.
Esikhundleni sepayipi lepulasitiki, sincoma amakhasimende ethu esebenzisa i-aluminium ehlanganiswe ngokushesha. Ngenxa yomklamo wayo, ingahlukaniswa kalula futhi idluliselwe ezingxenyeni ezintsha uma kunesidingo.
Sengiphetha, ngithanda ukugcizelela ukuthi ngayinye yezinhlobo zemishini ezethulwe iyasebenza ezimeni ezithile, inezinzuzo nezinzuzo zayo futhi ifuneka kahle emakethe. Futhi ochwepheshe bazokusiza njalo ekukhetheni.
Iqembu lezinkampani "i-Agrotrade"
Tags: 2020 No. 2izigubhu zohlobo lwesigubhuukufakwa okuyindilinga okubanziukunisela
I-Russia yandise ukuthengiswa kwe-anyanisi
I-GC "Imifino ye-Dmitrov": inkambo ezenzakalelayo
Ukuthuthukiswa kokuvuselelwa kabusha komhlaba kuvula amathuba amasha ezomnotho esifundeni saseVolgograd
"Amyl". Okubaluleke kakhulu amazambane
I-AFG National. Ngaphezu kwama-1500 ha ngaphansi kwamazambane
I-AgroAlliance-NN: "Kuphela yilabo abangasabi ukwenza imikhono yabo abasindayo kwezolimo"
IKiremko: Izinsiza Zokusebenza Zamazambane Ezithuthukile
I-Ukraine ihlela ukuthola isivuno esihle samazambane
Ukubukwa konke kwemakethe kwemikhiqizo yesitashi neyesitashi. Isimo ngemuva kwe-coronavirus
Inyanga Yensimu evulekile #DOKAGENE